UNAN FABER: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo ANNE FABER, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	29 Meyi 2019	• 3 Comments
Izolo sabona umboniso weendaba nge-Anne Faber, apho "uyise ka-Anne" athetha khona. Enyanisweni, kwakungqubuzana apho ulwaphulelo lwaluphumelele ekupheliseni kwamalungelo amaninzi kunokwenzeka kunjalo kumbulali owonakalisayo njengoMichael P. "Uyise ka-Anne" uthukuthele kangangokuba [...]
UMichael P. Anne Faber psyop 'Inkinga yokuphendula isisombululo' kwimeko yamapolisa angaphezulu kunye namalungelo ambalwa
Kufakwe kuyo ANNE FABER, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	28 Matshi 2019	• 18 Comments
Kwamanyathelo ambalwa ndachaza ukuba kutheni icala lika-Anne Faber, apho uMichael P. owayengummangaleli, wayenokwenzeka ukuba yi-PsyOp (ukusebenza kwengqondo). Ukusebenza ukunyanzelisa imithetho emininzi. Namhlanje loo mbongolo icace ngokucacileyo ephuma kwi-meow. Ubungqina bemibuzo Ingxaki, ukuphendula, isisombululo kwi-optima shape. Udala [...]
Isiphumo se-Anne Faber njengento echazwe ngaphezulu kwe-TBS ngaphandle kophando lweengqondo
Kufakwe kuyo ANNE FABER, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	4 Julayi 2018	• 2 Comments
Nangona abaninzi abafuni iimfuno ezinkulu ezifana neye-Anne Faber kunye noMichael P. mhlawumbi ukuba yinto yokusebenza kwengqondo (psyop) - ukunyusa ngamanyathelo amasha - injongo eqikelelweyo yolu daba ibonakala ngathi ngokukhawuleza emva kokuba loo nto ibonakale. [...]
Yintoni uMichael P. kunye ne-Anne Faber shishini enxulumene neNdebe yeHlabathi? Ukuphumelela izigidi ze-1!
Kufakwe kuyo ANNE FABER, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Juni 2018	• 6 Comments
Ukuba ufuna ukuvumela into enempembelelo enkulu ingahambi ngokungaqhelekanga, kuhlale kulungile ukwenza oko kwisiganeko esikhulu. Abantu sele bathatha uxakeke kuloo mcimbi kwaye bajonge oko kudlulayo, kodwa amandla okucinga okucokisekileyo sele sele ephelile okanye aphelile. Uya kubamba isiphetho [...]
Isingeniso esingenakwenzeka ngokusemthethweni: Ubungqina be-DNA, ingxelo ye-forensic kunye ne-autopsy malunga no-Anne Faber noMichael P. abangaboniswa kumgwebo
Kufakwe kuyo ANNE FABER	by UMartin Vrijland	12 Juni 2018	• 15 Comments
Ngaba uke wafumana isigwebo, apho ummangalelwa osecaleni kwaye wagwetywa kuphela ngesiseko sokuvuma? Ngokuqinisekileyo sonke simele sikholwe ukuba uMichael P. ungumdlwenguli owonakalisayo nombulali kwaye ukuba u-Anne Faber oqiqayo uya kuhamba ngebhayisiki engenamacala ngokuhlwa xa isimo sezulu sicacile [...]
Kutheni u-Anne Faber wanyuka kwi-scooter kaMichael P. ekubhekiseleleni kweso se-Soesterberg?
Kufakwe kuyo ANNE FABER	by UMartin Vrijland	12 Juni 2018	• 24 Comments
Ingxelo yoluleko malunga nokudlwengulwa nokubulawa kuka-Anne Faber ibonisa ngokucacileyo ukuba uMichael P. (iPanhuis) wayeya kumnyanzela u-Anne ukuba ahlale kwi-scooter yakhe. (Funda olu tshintsho / ukulungiswa kwimbali). Lapha wayeza kufaka i-helmet yakhe kunye nezandla zakhe kunye ne-tiewrap kunye [...]
Ezinye iimeko eziphawulekayo kumgwebo (i-monster) uMichael P. ecaleni kwimeko ye-Anne Faber
Kufakwe kuyo ANNE FABER	by UMartin Vrijland	11 Juni 2018	• 16 Comments
Kunzima ukungabikho ngokuthe ngqo kumgwebo kwaye ke ndidibana nemiyalezo ye-twitter esuka kuSaskia Belleman van de Telegraaf. Ngenxa yokuba ndihlala phesheya kwaye ndingakwazi ukunyamekela iindleko zokuhamba, yile ndlela kuphela. Kanti nje [...]
U-Anne Faber kwiphepha eliphambili le-Telegraaf, phi umhlobo uNathan Fidder kunye nabani abahlobo abachazwe ngabo?
Kufakwe kuyo ANNE FABER	by UMartin Vrijland	2 Juni 2018	• 17 Comments
Kwakuyiphulo elimangalisa kakhulu ngo-Anne Faber owayebonakala ephule namhlanje, ehlasela ngokucacileyo imbono yokuba yonke into ingase isekelwe kwi psyop. Kodwa nabani na ofunda le nqaku esuka kwi-Telegraaf eprintiweyo yanamhlanje, baya kuqaphela izinto ezimbalwa. Akukho nto ikhankanywe ngayo [...]
U-Anne Faber wangcwatshwa kuqala, wada waqhwaba, ngoku wangcwatywa ngokukhawuleza. Iphutha uyise uWim Faber?
Kufakwe kuyo ANNE FABER, IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	27 Meyi 2018	• 9 Comments
Singayifaka kwi-missest missings, kodwa kwimeko enzima njengesiko lika-Anne Faber, kubonakala kum ukuba awukwazi ukudibanisa umngcwabo ngomlilo. Ngoku sinokuthi i-Telegraaf yenza iimpazamo ngokuphindaphindiweyo, kodwa kumntu olahlekileyo njengo-Anne Faber Ndicinga ukuba iphelele [...]
UMichael P. uye wamemezela ngokubanzi ukubulawa kuka-Anne Faber: iindaba zobuxoki okanye inyaniso?
Kufakwe kuyo ANNE FABER	by UMartin Vrijland	11 Januwari 2018	• 24 Comments
Izolo abezindaba bathi uMichael P. (ngoku ngoku wonke umntu uyazi ukuba i-P imele iPanhuis) yayiza kuxela ngokubanzi ukubulawa kuka-Anne Faber. Oku kungazelelwe ngokukhawuleza ngexesha leseshoni yeprogram. Ukuba oku akuzange kukhishwe ngaphambili, ayihambisani nomgca wokuvuleka [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.372.736
AnOpen op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?